मेघालय तनाव ३ नेपालीभाषीको मृत्यु « Hamrosyangja.com :: syangja and waling bazaar latest news, people, photos and more.
« सडकमा सुकाइएको गहुँको बालामा चिप्लिएर नव दुलहादुलही
टेलिकमको सेवामा शुल्क कटौति »
मेघालय तनाव ३ नेपालीभाषीको मृत्यु
सिलिगुडी (भारत), जेष्ठ ५ – पूर्वोत्तर भारतको मेघालय र असम सीमास्थित लांगपी गाउँका नेपालीभाषी र खासीबीच सोमबार राति झडप हुँदा ३ नेपालीभाषीको मृत्यु भएको छ । प्रहरीले भने मृत्युको पुष्टि गरेको छैन ।
मेघालय गोर्खा वेल्फेयर सेन्टरका सदस्य टीआर जोशीका अनुसार मेघालयको वडापानीका ७० वषर्ीय धनपति बाँस्तोलालगायत ३ जनाको मृत्यु भएको हो । अरू दुईको नाम खुलेको छैन ।
उनीहरूको मृत्यु खासीको पिटाइबाट भएको जनाइएको छ । जोशीका अनुसार कोइलाखानीमा काम गर्न पुगेका नेपालीलाई कुटपिट गरेर देश छाड्न चेतावनी दिइएको छ । ‘घर जलाउने, कुट्ने, पिट्ने काम रोकिएको छैन’, जोशीले फोनमा भने, ‘नेपाली अमानवीय दुव्र्यवहार सहन बाध्य छन् ।’
जोशीले यो क्रम जारी रहे धेरै नेपालीभाषीले ज्यान गुमाउने वा पलायन हुन सक्ने जनाए । लांगपीमा गत आइतबार झडप भएको थियो । त्यस क्रममा प्रहरीको गोलीले ७ खासीको मृत्यु भएपछि घटना उग्र भएको हो ।
स्थानीय पत्रकार नन्द देवानका अनुसार झडपपछि नेपालीभाषी त्रस्त छन् । देवानले भने, ‘चाँडो समस्या सुल्झाइएन भने जटिल बन्न सक्छ ।’ उनका अनुसार कोइला खानीका मजदुर खासीको मुख्य निसाना बनेका छन् । ‘यहाँ आएर रोजगारी खोस्यो भन्ने खासीमा रिस छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उनीहरू तारो बनेका छन् ।’
घटनापछि केही मजदुर मारिने डरले स्वदेश र्फकन थालेका छन् । उनका अनुसार धेरै काम छाडेर हिँडिसकेका छन् । यसैबीच छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डका लागि आन्दोलित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले घटनाको विरोध गर्दै नेपालीभाषीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मोर्चाका महासचिव रोशन गुरुङले गृहमन्त्री पी चिदम्बरमलाई विज्ञप्ति पठाई त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
This entry was posted on Tuesday, May 18th, 2010 at 11:09 pm	and is filed under अन्तरराष्ट्रिय समाचारहरु, राष्ट्रिय समाचारहरु. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.